Fondation Mérieux: hitsangana ny ozinina ho an’ny fanampin-tsakafo | NewsMada
Niompana amin’ny fandraisana an-tanan’ny fanjakana ny fanafarana entana ilaina ho amin’ny lafiny sosialy ny fanapahana noraisin’ny filankevitry ny minisitra, omaly. Natao tamin’ny alalan’ny « visioncoference » izany.
Nivoitra tamin’izany ny fankatoavana ny handraisan’ny fanjakana an-tanana ny haban-tseranana sy ny hetra momba ny fampidirana kaontenera misy famokarana sakafo. Nanambara ny eo anivon’ny Fondation Mérieux, ny 15 marsa teo, fa hanampy amin’ny ady atao amin’ny tsy fanjarian-tsakafo izany.
Ankizy maherin’ny 50 000 hisitraka fanampin-tsakafo
Hametraka ozinina famokarana fanampin-tsakafo ao Taolagnaro ho an’ny mpianatra any atsimon’ny Nosy izy ireo. « Vonona hanolotra maimaimpoana koa ny kaontenera fanampiny ahitana fitaovana famokarana izany ity Fondation lehibe ity », hoy ny tatitry ny filankevitry ny minisitra.
Hisitraka ny vokatra avy amin’izany ozinina izany ny ankizy maherin’ny 50 000 any amin’ny faritra Anosy sy Androy ary hozaraina maimaimpoana eny anivon’ny « cantine scolaire » izany. Hahatratra 600 t isan-taona ny famokarana ataon’ity orinasa ity. Antony nanalefahana ny haba sy ny hetra izany, araka ny fangatahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Hahazo kamiao ny CUA
Etsy andaniny, nankatoavina ny handraisan’ny fanjakana an-tanana ny fanafaran’ny Unicef ireo fiara lehibe fakana fako « camion benne » miaraka amin’ny kojakoja samihafa ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). « Natao hanamafisana ny haitaon’ny sampana fandraofana ireo fako vaventy izany », hoy ihany ny tatitra.
Ankoatra izany, nolanin’ny filankevitry ny minisitra ny didim-panjakana manambara ny hampiasan’ny fanjakana ny tany ao amin’ny tanànan’i Mahavelona Foulpointe, voafaritry ny reniranon’i Onibe sy ny kaominina Ampasimbe Onibe. Eo koa ny ao amin’ny kaominina Andondabe, ny reniranon’Ifontsy ary kaominina Antetezambaro miaraka amin’ny ranomasimbe Indianina. Tafiditra ao amin’ny drafi-pandrindrana ny tanàn-dehibe izany.
Nankatoavina koa ny hampidirana maimaimpoana ireo fitaovana nohafarana omena ny ivontoerana fanofanana asa (CFP) ao Nosy Be. Tahaka izany koa ny nankatoavana ny fahazoan-dalana handray fitaovana : « appareils mammographies analogiques », miisa 10 sy ny « scanner 64 barettes, miisa dimy.